Umaki: scott brinker | Martech Zone
Umaki: scott brinker
Ama-Data Management Platforms (DMPs) afike endaweni yesehlakalo eminyakeni embalwa eyedlule futhi abonwa ngabaningi njengomsindisi wezokumaketha. Lapha, bathi, singaba "nerekhodi legolide" lamakhasimende ethu. Ku-DMP, abathengisi bathembisa ukuthi ungalanda lonke ulwazi oludingayo ukuze ubuke ikhasimende elizi-360-degree. Inkinga kuphela - akulona iqiniso. UGartner uchaza i-DMP njengeSoftware efaka idatha kusuka emithonjeni eminingi
Ikusasa nekusasa lobuchwepheshe bokumaketha kwaxoxwa ngakho futhi kwathathwa engqungqutheleni yokuqala yeMartech eyayiseBoston. Bekungumcimbi othengisiwe ohlanganise abaholi bemicabango abahlukahlukene emhlabeni waseMartech. Ngaphambili, ngaba nethuba lokuxhumana nosihlalo wengqungquthela, uScott Brinker, ukuze ngixoxe ngokuziphendukela komkhakha nokuthi indima yeChief Marketing Technologist ibe kanjani indima okumele ibe nayo ezinhlanganweni zokumaketha emhlabeni wonke. Engxoxweni yethu, uScott